सिरियामा सत्ता प्राप्तिको लागि सल्काईएको आगो, अमेरिका देखि रुस सम्मको लुकेको छ यस्तो स्वार्थ – Ekathmandunepal
Homeपत्याउनै गाह्रोसिरियामा सत्ता प्राप्तिको लागि सल्काईएको आगो, अमेरिका देखि रुस सम्मको लुकेको छ यस्तो स्वार्थ
सिरियामा सत्ता प्राप्तिको लागि सल्काईएको आगो, अमेरिका देखि रुस सम्मको लुकेको छ यस्तो स्वार्थ
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १०:३९ ekathmandu Nepal पत्याउनै गाह्रो 0
दोस्रो बिश्व युद्ध पछि सन १९४६ मा सिरिया फ्रान्सको अधिन बाट स्वतन्त्र भएको थियो ।स्वतन्त्रताको गित सिरियामा गुन्जदै थियो र सिरियालि जनता पनि त्यस स्वतन्त्रताको धुनमा हराउंदै थिए । सन १९६१ सम्म जनताले लोकतन्त्रको मिठो स्वाद चाख्न पाएका थिए तर खुशी सधै भरिकोलागि कहाँ नै टिक्न सक्छर?
सन १९६१ -१९६८ साल सम्म इजिप्टको एउटा युनियनले सिरायालि राजनितिमा हस्तक्षेप गरिराख्यो जसका बाबजुत सिरियालि राजनितिमा ठुलो फेर बदल हुन गयो । यसकै फल स्वरुप सिरियामा” मल्टिपार्टि डेमोक्रेसि”लाई हटाएर एक पक्षिय राष्ट्रपतिको शासन जारी गरियो।
लेखक: विशाल अर्याल
देशमा एउटा मात्रै पार्टि” सेकुलर सिरिया रिपबल्लिक”ले आफ्नो पुर्ण कब्जा जमाउन सफल भयो । सन १९७० मा यसै पार्टिबाट अलवाइट धर्मका हफिज अल आसाड आदि जनताको चाहाना बिरुद्ध आफुलाई राष्ट्रपति पदमा उभ्याए । उनले सन १९७३ मा संविधान जारी गरे जसले राष्ट्रपति बन्न इस्लाम हुनु नपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
सिरियामा अहिले पनि करिव पचहत्तर प्रतिसत मानिस इस्लामिक धर्मका छन र उनिहरु सबै मुस्लिम राष्ट्रपति चाहान्थे । त्यसैका कारण सिरियालि मानिसहरु आफ्नो अलवाइट धर्मका राष्ट्रपति बिरुद्ध अभियान जारी गरे।
जसको फल स्वरुप जनता द्वारा नै सिरियामा बिभिन्न आतङ्कवादी संगठन जस्तै बोकोहराम,अलकायदा,स्बतन्त्र सिरियन आर्मि आदिको निर्माण गरियो र सरकार ढाल्ने बिभिन्न कदमहरु पनि अगाडी बढाइयो।
उनीहरु शान्तिको बाटो भन्दा पनि आक्रामक बाटो बाट आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न तर्फ लागे । यसै घटनाले सिरियाको शान्तिमय वातावरण मात्र नभइ पुरा देशको भविष्यनै अन्धकार तर्फ धकेलिन पुग्यो ।
यस घटना भन्दा अगाडी सिरिया संसारकै एक विकशित राष्ट्रहरु मध्यको एक राष्ट्र हुने गर्थ्यो । र आज त्यसको ठिक बिपरित सिरियाले आफुलाई उभ्यान सफल भएको छ ।
अफिज अल आसाडको कार्यकाल उनको मृत्यु सन २००० साल पछि अन्त्य भयो । उनि पछि उनैका भाइ बसर अल असाड राष्ट्रपति पदमा चुनिय । उनले मुस्लिम परिवारकि आस्मा नामक महिला संग विवाह गरे जो एक शिक्षित महिला थिइन ।
अहिले सिरियामा अलमाइट र मुस्लिम दुबैको संयुक्त शासन छ भन्दा फरक नपर्ला तर दाजु हफिजले मच्चाएको सिरियालि आतंक भने अझ जीबित छ। आतंकवादी संगठनले सिरियालि आसाडको सरकार ढाल्न पटक पटक आक्रामक कदम उठाइनै राख्ने गर्छ । जस बाट सरकार भन्दा पनि जनतानै पिडित भैरहेका छन ।
पटक पटकको हमला पछि आफ्नै देशमा अबस्थित विद्रोहि संगठन बाट बच्न सिरियालि सरकारले छिमेकि राष्ट्र रुस संग सहयोगको आहवान गर्ने गरेको छ ।
आफ्नै सरकारको आग्रहमा जनता द्वारा निर्माणित बिद्रोही संगठनका बिद्रोह रोक्न आफ्नै देशमा रुसले गोला बारुदको हमला गर्ने गर्दछ जसको कारण बर्सेनि लाखै जनताले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन ।
त्रिपक्षिय द्वन्ध मात्र नभएर अन्य देशले पनि यसको फाइदा उठाउदै सिरियामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले पनि सिरियालि पेट्रोल खानि र अन्य विभिन्न स्वार्थका कारण आफ्नो शक्तिको पटक पटक प्रदशनि गर्दै आएको छ ।
अमेरिका पनि आसाडको सरकार हत्याउने दाउमा उहिल्लै देखिरहिआएको छ ताकि आफ्नो अनुरुप सरकार बनाइ त्यहाको प्राकृतिक संमपत्तिको फाइदा आफुहरुले उठाउन सकुन ।
सामाजिक संजालमा भाइरल हुदै आएका छेत-बिक्षेत अबस्थामा रहेका बालबालिकाको तस्विरले आखिर कस्को मन नछोला र??तर त्यस भित्रको बास्तबिकता भने फरक हुन सक्ने अनुमान छ । पहिले पनि सिरियालि आतंकवादी संगठन हरुले मासुम बालबालिकालाई आफ्नो ढाल बनाउंदै आएका थिए ।
यस तस्वीरलाई नेपामा समेत “आमा बुवाको चिहानको विचमा सन्तान भनेर” प्रचार गरिएको थियो
उनिहरुले विश्व जगतलाई आफ्नै सरकार बिरुद्ध भड्काउन पहिले पनि यस्तै बालबालिकालाई प्रयोग गरि उनिहरुलाई बिभिन्न खालका मेकप गराएर यस्तै फोटो भाइरल गराइएको थियो ।
तसर्थ अहिले भाइरल भएका ति फोटोहरु पनि उनिहरुकै चाल हो या साच्नै बालबालिका यस द्वन्द्धका शिकार भएका हुन यसको बारेमा जानकारी सायद उनीहरुलाई मात्र होला ।
डिम्पल गाला भएका युवतीहरुलाई किन मन पराउँछन् पुरुष ?
मेरो बुढाले मेटाउन नसकेको प्यास कस्ले मेटाउन सक्छ?… (185)
८ हजार किलोको अन्तरिक्ष स्टेशन बिग्रिएर पृथ्वीतर्फ… (63)